DAMAASHAADKA & DABBAALDEGGA CIIDDA CARRAFO 2017 – Hope Generation – جيل الأمل
Malaayiin musliim ah oo ku kala nool dunida daafaheeda ayaa maalmahan u dabbaldegaya Ciidda Carrafo ee Sandaka 1438 Hijriya oo ku began 2017. Sidookale shacbiga Soomaaliyeed si taa lamid ah isna dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ugu dabbaaldegaya maalmaha qiimaha kuleh agtooda ee ciidda Carrafo.
Munaasabad si weyn ay usoo agaasimeen Ururka Rajadda Dhalinyaradda Soomaaliyeed جيل الأمل – Hope Generation kuna saabsanayd damaashaadka iyo dabbaaldegga ciidda Carrafo ayaa maanta (03/09/2017) ka dhacday magaalada Muqdisho.
Xafladda waxaa kasoo qeybgalay martisharaf kala duwan oo kakala socday: Xubno ka kala socday faracyadda uu ururku ka kooban yahay, Ururada Dhalinyaradda ee aynu jaalka nahay, qaar kamid ah madax jaamacadeed, abwaanno, ururada bulshada rayindka ah iyo marti kale oo magac iyo maamuusba lahaa.
Guddoomiye kuxigeenka ururka mudane Cabdifataax Cali Cabdalla oo madasha ka hadlay ayaa ku nuuxnuuxsaday taariikhda ururka iyo sababihii uu u aas’aasmay, isagoo guud ahaan shucuubta muslimka, gaar ahaan shacbiga soomaaliyeed u rajeeyay in ilaahay ku gaarsiiyo sanadkan kiisa kale bashbash, barwaaqo iyo nabad.
Munaasabadda oo ubadnayd madadaalo, maadays iyo marxabaynta Ciidda Carrafo ayaa udhacday kuna soo gabagabowday sidii loogu talagalay.
Ururka Hope Generation waa urur Dhalinyaro, Madaxbannaan, Maxali ah oo u taagan wacyigalinta, waxbaridda, wanaag u horseedka iyo soo celinta rajada dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaana lagu aas’aasay Magaalada Muqdisho sanadkii 2014
Nageeye Cali Khaliif Muna Axlaa Maxamed Barawaani